Migrationsverket oo shaqaalaynaysa 1000 qof | Somaliska
Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa shaacisay in ay shaqaalayn doonaan dad ka badan 1000 qof ka dib markii ay faraha ka bateen qulqulka magan galyo doonka wadanka iska dhiibaya. Shaqaalaha Laanta Socdaalka ayaa hada cabasho weyn ka muujiyay xaalada iyagoo sheegay in aysan xamili karin cadaadiska saaran. Sanadkaan ayaa Sweden waxaa magangalyo ka dalbatay dad gaaraya 80.000 qof, dadkaas ayaa inta badan ka soo gala Sweden magaalada Malmö halkaasoo la filayo in qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha cusub la geyn doono sida uu qoray wargeyska DN.
Culeyska saaran shaqaalaha ayaa sidoo kale keenay in ay waqti dheer qaadato go’aamada laga gaarayo magangalyo doonka iyo xiliga laga qaadayo wareysiga. Shaqaalaynta dadka cusub ayaa bilaaban doonta sanadka soo socda iyadoo socon doontaa ilaa 2016, dadka la shaqaalayn doono ayaa isugu jira qeybaha kala duwan ee hay’ada sida maamulka, baaritaanada iyo go’aamada. Migrationsverket ayaa hada waxaa ka shaqeeya dad gaaraya 5000 qof.
Qarashka uga baxa shaqaalaha Laanta Socdaalka ayaa calaa qof gaaraya 600 000kr sanadkii, iyadoo haddii 1000 qof lagu kordhiyo shaqaalaha ay kor u kici doonta qarashka ku baxa Laanta Socdaalka ilaa 600 milyan oo karoon. Sanadka soo socda ayaa la filayaa in Sweden ay iska dhiibaan dad gaaraya 95 000 qof.
Haddii aad doonayso in aad ogaato shaqooyinka ka banaan Migrationsverket, waxaad ka helaysaa halkaan.
Weerar lagu haayo wasiir Muslim ah
Iskuul ku yaala Rinkeby oo la doonaya in la xiro
Safaarada Sweden ee Addis Ababa ma laaluush baa laga qaataa?
ASC waan idin salaamay dhamaan asaxaabta webka iyo jimcaale aniga maanta ayaa waxaa la iisoo tuuray diidmo waxaan ahaa dadka labada sano lagu xujeeyay sanad iyo lixbil Ayaan sugaayay dhiig ayadoo dhiigii layga qaadina waxaa la iisooturay diidmo marka waxaan idiin sheegayaa dadka labada sano lagu haystayoow in wali wax sharci ah oo maxkamad soo ogolaatay in aysan jirin warqadeydana waxaa lagu ray in la iigu diiday in aan labo sano wada nooleen ee ogaada in kastoo calafku gooni yahay wcs
umu muscab says:
asc walaal ma maxkamadaa kusoodiiday mise migrationka, dadki horay isku sheegtay miyaad ahayd ee laba sano waxkar sheegtay mise dadka danbe?intaas iiga soojawaab walaal adoomahadsan
December 20, 2014 at 22:34
ASC umu muscab abaayo migarationka ayaa iisoodiiday maya dadka hada cusub oo sadexda sano isqabo hal wiil oo 2labo jir ah ayaan haystaa dhiigii in cunuga aabihii looga qaado waa diideen sababtuna waa soomaliya labo sano kumiinan wada nooleen sidaas darteed ayaa la iigu diiday
December 22, 2014 at 23:20
ma diidmadi kuugu horaysaa waligaa abaayo, goormeesa dacwo bilaawday